Adobe animate CC: inona izany ary inona no azonao atao amin'ny programa | Famoronana an-tserasera
Raha mpankafy sary mihetsika ianao dia azo antoka fa efa nanontany tena ianao hoe programa inona no mety indrindra. Ny iray amin'izy ireo dia tsy isalasalana fa ny Adobe Animate CC. Fa inona no ataon'ity fampisehoana ity?
Handeha isika izao milaza aminao ny momba ny Adobe Animate CC, iray amin'ireo malaza indrindra avy amin'ny Adobe ary nampihetsi-po tamin'ny alàlan'ny frame sy feo, amin'izay nahatratraranao ny sarimiaina 2D. Te hahafantatra bebe kokoa momba ny programa ve ianao?
1 Inona no atao hoe Adobe animate CC
2 Ahoana ny fiasan'ny programa
3 Adobe animate CC endri-javatra
3.1 Fakan-tsarimihetsika Adobe Animate
3.2 Fomba fampivoarana samihafa
3.3 Mampiasà volo
3.4 Fahafahana mampifandray feo amin'ny Adobe Animate CC
3.5 Azonao atao koa ny mampiditra lahatsoratra
4 Sarimihetsika sy fandaharana amin'ny fahitalavitra vita amin'ny Adobe Animate CC
5 Ohatrinona ny vidin'ny Adobe Animate CC
Inona no atao hoe Adobe animate CC
Raha efa ela ianao no teo amin'ny tontolon'ny sarimiaina dia mety ho fantatrao fa tsy ny Adobe Animate CC no anarana voalohany nanombohan'ity programa ity. Raha ny marina dia niseho tamin'ny anarana hafa teny an-tsena, Adobe Flash Professional, Macromedia Flash, na FutureSplash Animator. Izy rehetra dia mifandraika amin'ilay fandaharana mitovy noforonin'i Adobe, ary iray amin'ireo zava-dehibe indrindra ho an'ny mpamorona miaraka amin'ny Adobe Illustrator sy Adobe Photoshop.
Manokana, ny niseho tamin'ny Mey 1996 ny programa rehefa namoaka azy tamin'ny anarany tany am-boalohany ny FutureWave Software: FutureSplash Animator.
Tamin'io taona io ihany, Macromedia dia nividy ny FutureWave ary nanonona ny vokatra rehetra, ka izany no antony, tamin'ny Desambra 96, dia natao hoe Macromedia Flash 1.0 izy io. Fa maninona 1.0? Eny, satria nisy fanatsarana bebe kokoa natao, ary nahatonga azy io ho iray amin'ireo fitaovana fanaovana sary an-tsaina tsara indrindra nisy. Raha ny marina dia nitarina tsikelikely izy io hany ka tsy vitan'ny fanaovana sary mihetsika tsotra fotsiny, fa afaka namorona haino aman-jery multimedia, na koa singa ifandraisana izay nampiharina tamin'ny Internet.
Araka izany, tamin'ny 2005, taorian'ny fividianana Macromedia an'i Adobe, dia nandalo teo am-pelatanan'izy ireo ity programa ity, ary nomeny anarana hoe Adobe Flash. Tamin'ny taona 2007 rehefa nanangana programa vaovao izy ireo, Adobe Flash CS3 Professional, izay novaina ho CS6 mba hamorona Creative Cloud (avy eo ny anarana hoe CC).
Ary farany, ary amin'izao fotoana izao, ny fotoana farany nanovany ny anarany dia ny 8 febroary 2016 lasa Adobe Animate, anarana iray natao hamafana tanteraka azy amin'ny Adobre Flash Player sy izay rehetra misy ifandraisany amin'ny Flash Player (izay, toy ny fantatrao, tsy atolotra azy intsony).
Tamin'izany fotoana izany dia efa nanomboka tsy nahazo laza intsony ilay programa satria nanomboka nandoa vola izy io, ary nitady fomba hafa (na mora vidy) hafa ny olona. Raha ny marina, iray amin'ireo nifaninana tamin'ity iray ity dia Toon Boom Animation, izay manana mpankafy legiona goavambe koa.
Ahoana ny fiasan'ny programa
Raha liana hahafantatra ny fomba fiasan'ny Adobe Animate CC ianao dia tokony ho fantatrao fa amin'ny fomba nentim-paharazana no anaovany izany. Raha lazaina amin'ny fomba hafa, mikarakara ny fandaminana sary sy feo ao anaty sosona sy sary. Ny zana-kazo tsirairay dia mizara ho sosona ary mamela ny fanaovana sary miorina amin'ny vector. Amin'izany fomba izany dia afaka mamorona sarimiaina, fampifangaroana ny hetsika ianao, na mizara ny filaharana mba hamelabelarana ny sarimiaina tsirairay.
Amin'izao fotoana izao dia mamela ihany koa ny fampidirana ny rafitry ny taolana mba hiteraka fihetsehana voajanahary ary koa ny mety "fanodikodinana" fakantsary
Adobe animate CC endri-javatra
Ny kinova vaovao an'ny Adobe Animate CC dia tsy misy ifandraisany amin'ny teo aloha, fantany ny fomba fanao mifanaraka amin'ny vanim-potoana vaovao ary havaozina maoderina, nefa koa manitatra mba hahazoana fitaovana tena feno. Noho izany, anisan'ireo fiasa azonao atao miaraka amin'ity programa ity ny:
Fakan-tsarimihetsika Adobe Animate
Fitaovana iray azonao ampiasaina izy io tariho ny fakantsary mihetsika mba hahafahanao mamorona valiny azo tanterahina bebe kokoa satria hamela anao, ankoatry ny zavatra hafa, hanao zoom, hanodinkodina na handahatra ny sarimiaina, ka hanampy vokany hafa.
Fomba fampivoarana samihafa
Talohan'izay, ny kinova taloha dia nanohana endrika famoahana voafetra ihany, ny tetikasa tsy azo vonjy amin'ny fomba hafa. Fa izao kosa dia niova ary ny vokatra dia azo aondrana amin'ny endrika samihafa toa ny HTML5, horonan-tsary 4k na WebGL, miankina amin'ny fampiasana tianao homena ny iray na ny iray hafa.
Azo atao koa ampifanaraho amin'ny CSS ny data, na, raha tianao ny taloha, dia azonao atao ny mampiasa ny endrika SWF.
Asa iray hafa an'ny Adobe Animate CC ny fampiasana borosy boribory, izany hoe azonao atao ny mitaona ny tsindry sy ny fironana amin'ny fanaovana tsipika, kapoka sns. mamorona sary sary 2D miaraka amina lamina, tsipika, endrika ...
Fahafahana mampifandray feo amin'ny Adobe Animate CC
Ny iray amin'ireo lahasa mahavariana indrindra dia ny mety hampiasa audio ary, tsy izany ihany, fa ampifanaraho amin'ny sary mihetsika ihany koa, afaka mamorona andian-tantara avy amin'ny rangotrao amin'ny solosainanao manokana.
Azonao atao koa ny mampiditra lahatsoratra
Farany, manana Typekit ianao, fitaovana ao anatin'ny Adobe Anime CC izay manampy anao mampiditra lahatsoratra amin'ny sarimiaina, ahazoana kalitao lalandava. Mazava ho azy, ho an'ny HTML5 ihany.
Sarimihetsika sy fandaharana amin'ny fahitalavitra vita amin'ny Adobe Animate CC
Ary satria fantatray fa tsara indrindra ny mampiseho zavatra azo ampiharina aminao, ity misy lisitr'ireo sarimihetsika sy andian-tsarimihetsika noforonina tamin'ny fampiasana an'ity programa ity. Ary ny sasany amin'izy ireo dia hahagaga anao kely fotsiny.
Ilay tontolon'i Gumball tsy mampino
Bolt (manokana ny bola)
Sintomy izany Ralph (ireo mari-bola)
The Incredibles (isa)
Alejo sy Valentina
The Fairly OddParents (tamin'ny vanim-potoana fahafolo)
Ohatrinona ny vidin'ny Adobe Animate CC
Ary farany, raha mieritreritra ny hahazo Adobe Animate CC ianao dia tokony ho fantatrao fa tsy maimaim-poana ity programa ity, fa, toa ny hafa avy amin'ny Adobe, dia mandany vola. Miankina amin'ny firenena onenanao dia avo kokoa na ambany ny vidiny.
Any Espana, ny vidiny dia 24,19 euro isam-bolana hamolavolana sary mihetsika mifampiraharaha amin'ny lalao, andian-tsarimihetsika ary ny tranonkala. Ity dia fandoavam-bola isan-taona izay hahena isam-bolana. Ny fomba iray hafa ahazoana azy io dia ny fandoavana izany mialoha, izany hoe mandoa ny fahazoan-dàlana mandritra ny herintaona. Ny vidiny dia 290,17 euro isan-taona. Farany, manana fotoana ihany ianao hampiasa azy io mandritra ny fotoana iray, mandoa 36,29 euro isam-bolana.
Mazava ho azy, afaka mahita klona maromaro na kopia piraty amin'ny programa ianao, na dia tsy soso-kevitra aza izany, tsy noho ny fahafahan'ny viriosy miditra ao amin'ny PC ihany. Safidy iray hafa ny fampiasana fandaharana mitovy amin'ny Adobe Animate CC, sady maimaim-poana no karama.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Fitaovana famolavolana » Adobe animate CC